Indaba inevoti lamaNdiya: Ngabe nakulokhu aboHlanga bazoza muva? - Bayede News
Isithombe: nguTheo Jeptha/ANA
Abanikazi bezinkundla zokuxhumana abanandaba nabantu
Emhlabeni jikelele kuvamile ukuthi isimiso sepolitiki yalelo lizwe samukele noma singqubuzane nokuba khona kwalabo ababizwa ngedlanzana. Lena yimiphakathi ehlonzwa njengemincane ngesibalo ezweni.
Inhlangano yomhlabuhlangene i-United Nations ize ibe nemithetho evikela le miphakathi kulandela isivumelwano sangowe-1992 esaziwa nge-United Nations Minorities Declaration. NgokweSigaba 1 sikhuluma ngamaqembu amancane ngokwesizwe noma ngokobuzwe, ngokwamasiko, ngokwenkolo nangokolimi, futhi sihlinzeka ukuthi imibuso kufanele ivikele ubukhona bayo.
Umlando wamazwe uyehluka ekutheni kuphetha kwenzakaleni njengoba kwamanye amazwe idlanzana leli liyamukeleka nalo ngezenzo lizibone liyingxenye yeningi. Kuthi kwamanye amazwe kuhlale kuphilwa impilo yokuklolodelana, ukusolana nokubulalana. Cishe isikhathi esiningi ukungqubuzana kwalabo abaningi imvamisa abathathwa njengemisinsi yokuzimilela kulelo lizwe noma abafika kuqala kanye nemiphakathi elidlanzana kudalwa phakathi kokunye wukusolana, ukuxovwa yipolitiki nokuncintisana ngakwezomnotho.
Lesi simo sikhona kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Okunye okucishe kufane emhlabeni ngamandla aleyo mphakathi elidlanzana yokukwazi ukuthubeleza ezimweni zepolitiki nomnotho, kokunye ngenxa yezithukuthuku zayo kanjalo nokutetema besebenzisa ithikithi lokuba yidlanzana okuyinto engesona isono kupolitiki.
ENingizimu Afrika nje akuyona imfihlo ukuthi yize kuthiwa idemokharsi lena isho intando yeningi kulokhu okungaboHlanga, abo abayidlanzana cishe yibo abakhala kuzwakale. Isigameko sakamuva esenzeke elokishini lamaNdiya iPhoenix siqale inkulumompikisano ekutheni engabe uHulumeni, osopolitiki nabantu nje jikelele bazwela kangakanani uma ukukhuluma kuthinta imiphakathi elidlanzana.
Kukhona ukuvumelana ukuthi into eyaqala incomeka lapho abanikazi bempahla oningi labo kwabe kungamaNdiya babesukumela phezulu besabela impahla yabo ababesola ukuthi ingahle itatshwe yaphenduka inhlekelele ngesikhathi sekubulawa abantu oningi labo kungaboHlanga. Okubukeka kwakhathaza kakhulu kwaba yisenzo sabaholi kuyo yomibili imiphakathi, owamaNdiya nowaboHlanga kanjalo namaqembu epolitiki.
Ngesikhathi kubulawa abantu ePhoenix kuyaqapheleka ukuthi abaholi bamaNdiya abaziwayo abanye abakupolitiki, kwezenkolo namasiko nosomabhizinisi bangena ngaphansi kwamatshe bathula du. Uma babe khuluma babekwenza lokho bekhulumela eziswini.
Abanye babo abasemaqenjini amakhulu kuleli kabazwakalanga bebabaza ukubulawa kwaboHlanga elaba likhulu nelilula yilelo lokuthi akubuyiswane kungekho ofuna ukungena emathunjini odaba. Kubukeka sengathi babehlukene kabili njengoba kwabe kukhona labo abaseka ukuphawula besola okwenziwa ngamanye amalungu omphakathi wawo ngoba besaba ukuthi bazokhishwa inyumbazane, bese kuba khona labo ababethule ngoba uma bevumelana nesenzo sabakwabo (amaNdiya) bazosolwa zinhlangano zepolitiki abayingxenye yazo oningi lamalungu lazo kungaboHlanga.
Isigameko sasePhoenix siqondane kabi nokhetho loHulumeni Bendawo nokwenza kube lukhuni kosopolitiki nezinhlangano zabo ukuba bathule noma bahalele ukuzuza ngesigameko. Okwakamuva kube yisenzo selungu leDemocratic Alliance (DA) elishiphe kudliwa lagxumeka isikhangisi esisuse umsindo.
Lesi senzo sithole ukugxekwa nxa zonke njengoba neqembu ligcine liziqhelelanisile naye lo mfo. Akukho ukungabaza ngezinhloso zalesi senzo, ukuthi bekusondezwa ivoti, kushelwa ngesigameko lesi nokho induku yashaya imviki.
Kunede kwabonakala ukuthi iDA igeje umgodi njengoba bekukhona abebethi yize isithi
kayazi kepha umholi wayo usivunile lesi senzo, agxuma ahlala amanye amaqembu. UKhongolose ujube loyo obambe njengoNobhala Jikelele, uNkk uDuarte noyinikize iDA kwakubi esho khona ukuthi yenze edume ngakho.
“Kwasiphoxa siyi-ANC ukubona iphosta eyadala impikiswano enkulu ezweni. Kithina le phosta akusiyona into entsha. Eminyakeni engama-30 iDA kuyo yonke imikhankaso ihlale inomkhankaso wokulwa futhi sebeqhuba umqondo wabo wobukoloni wokuhlukanisa bese uyabusa njengoba benza eWestern Cape bese bethemba ukuthi bazosebenzisa ubuhlanga obuzovukuza abantu ukuba babavotele,” kusho uDuarte.
Kuthe kusenjalo iPhoenix yahanjelwa ngowayengumholi we-Inkatha Freedom Party, uMntwana waKwaPhindangene. Yize lo mholi enomlando omude nalo mphakathi kepha kulokhu okunye abekuphethe emgodleni wakhe yisicelo sokuba umphakathi wasePhoenix uvotele iqembu lakhe.
Usole kakhulu izenzo zodlame nokudlova watusa ubunye. “Kufanele kugudlukwe kwabayingcosana kuyiwe kwabaningi abasebenzela ukutakula iNingizimu Afrika. Impikiswano kudinga ukuba iguquke. Inhlukano phakathi kwabagqugquzela ubuhlanga nalabo abangamaqhawe ayilungile. Amaqhawe akusibo abantu abazithathela umthetho. Amaqhawe oqobo ahlanganisa imiphakathi. Amaqhawe angampela aletha ukuthula. Emiphakathini yasePhoenix, yaKwaMashu, yaseChatsworth, waseBhambayi nakwezinye izindawo; kunezigidi zamaqhawe. Ngilapha namhlanje ukuzokhuluma namaqhawe angempela ngoba niyiwona azotakula leli lizwe. Yini enizofuna izimpendulo kuHulumeni ekuhlulekeni ukufeza izethembiso zawo,” kusho uMntwana .
Ivoti lamaNdiya liyinoni liyagxumagxuma
Konke lokhu akwethusi njengoba selokhu kwathi nhlo ivoti lamaNdiya liyinoni kulamaqembu amathathu. Kusethulo sabo esithi: “Minorities in the rainbow nation: The Indian vote in 1994, izifundiswa zamaNdiya oSolwazi u-Ashwin Desai noBrij Maharaj bayachaza ngomlando wevoti lomphakathi wamaNdiya.
Laba bobabili bathi: “Ukhetho lokuqala lwedemokhrasi eNingizimu Afrika lwaba ngomhla zingama-27 ngoMbasa we-1994 bekunamaphepha amaningi ahlaziya imiphumela yokhetho, kube kuncane ezindleleni zokuvota kwamaNdiya aseNingizimu Afrika aKwaZulu-Natal. AmaNdiya aseNingizimu Afrika avotela iMinority Front ngobuningi bawo ezingeni lesifundazwe, neNational Party ezingeni likazwelonke.
Ngakolunye uhlangothi kusethulo esisihloko sithi: Between Non-Racialism and Multiculturalism: Indian Indentity and Nation Building in South Africa uSolwazi u-Edward Ramsamy uchaza athi: “Ngale minyaka yalo njengenhlangano ekhonondayo, i-ANC yahambisana ‘nokungacwasi ngokobuhlanga’, inzikisamqondo egcizelela ukuzibona nimunye njengezakhamuzi zaseNingizimu Afrika, ukuze kube khona ukukhuluma okuphikisana nokucwasa ngokobuhlanga okungesiyona inzikisamqondo yobandlululo. Nokho, inhlangano ibe nobunzima ukuthola ukwesekwa kumaNdiya nakumaKhaladi ngesikhathi sokuwelela kudemokhrasi.
“Kuya ngokwanda umqondomsuka wokuhlalisana ngokwamasiko esizweni futhi okuthuthukisa umqondo ‘wesizwe esiluthingo lweNkosazana’ ukuze kugxisheke umuzwa wobunye ezakhamuzini zaseNingizimu Afrika ezahlukile. Lo mqondomsuka wamsikoningi eNingizimu Afrika ube yimpumelelo. AmaNdiya amaningi avotele i-ANC ngowezi-2004, egudluka ekwethembekeni kwawo kuNational Party nakuDemocratic Party okwakukhona okhethweni olwedlule.”
Lezi zethulo zombili nezigameko ezingenhla zifakaza khona ukuthi ivoti lamaNdiya liyagxumagxuma nokuthi amaqembu enza konke ukuba alithole. Ngokhetho lwezi-2004 uKhongolose wazuza ngevoti lamaNdiya nayesesukile kuNational Party eyabe ivele ingasekho nakuDA. Echaza ngalolu fuduko uSolwazi uFatima Meer ongasekho wathi imbangela yalokhu kwaba wukuthi umphakathi wamaNdiya wawubona intuthuko eyenzakalayo ezindaweni zawo njengakoChatsworth. Ngokwakhe ivoti leli labe libonga uKhongolose ngalokho. Ngakolunye uhlangothi wathi ivoti lamaNdiya alandela inkolo yobuSulumane lagqugquzelwa kakhulu yipolitiki yaseMiddle East nayilapho i-ANC ibonakala yeseka abasePalestine kuno-Israeli kanti iDA yona ibonakala yeseka abakwa-Israeli.
Khona manjalo echaza ngokuvotelwa kwe-ANC ngamaNdiya okhethweni lowezi-2004, umhlaziyi wepolitiki uNks uLubna Nadvi wacashunwa ethi “I-ANC ibe nomkhankaso omuhle kakhulu futhi bebezilungiselele kahle. Uthe kube nezizathu ezimbili ezisemqoka zokuthi kungani ivoti lamaNdiya eChatsworth nasePhoenix lashenxa kuDA. I-ANC yathola ivoti lamaMuslim ngoba yayesekwa abaholi bamaMuslim.
Abanye babo benza izikhangiso zamaphaphandaba ezinxenxa amaMuslim ukuba avotele i-ANC. Okunye okwaba semqoka ukuba amaMuslim avotele i-ANC kungaba ukuhlobana kokungqubuzana okwakuseMiddle East. IDA ayinayo inqubomgomo ecacile futhi lokhu kwenza amaMuslim amaningi ukuba avotele i-ANC. AmaHindu nawo avotela i-ANC njengoba futhi ayesekwa abaholi bezenkolo.
Kulolu khetho oluzayo bambalwa abangaphika kumaqembu amathathu amakhulu okuyi-ANC, i-IFP neDA ukuthi bangenza konke ukuheha ivoti lamaNdiya kakhulukazi eThekwini isizathu zalokhu wukuthi iNingizimu Afrika iyikhaya lamaNdiya amaningi e-Africa ikakhulukazi eThekwini.
Emuva kwesigameko sasePhoenix kukhona ukwesaba kwabanye emphakathini wamaNdiya ukuthi kungenzeka agutshezelwe yiningi okungaboHlanga. Lesi simo singanomthelela omuhle noma omubi emaqenjini epolitiki yikho nje ezicuphe aqeda ukuze azuze ngalolu khetho ngoba ozothola ivoti lamaNdiya eThekwini usethubeni elihle lokwenza kahle.
nguMfo waKwaNomajalimane Oct 15, 2021